पहिरोले बगाउन लागेको विद्यालयमा पढाई ! - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ स्वास्थ्य/शिक्षा ∕ पहिरोले बगाउन लागेको विद्यालयमा पढाई !
Sindhu Khabar बुधबार, २०७८ भदौ २३ / १४:५२
घरि पढाईरहेका शिक्षकतिर ध्यान त घरि कक्षाकोठाको झ्याल छेउबाटै झरिरहेको पहिरोतिर आँखा । जब पानी पर्न थाल्छ, त्यतिबेला विद्यार्थी मात्रै हैन शिक्षकका पनि मुटु हल्लिन थाल्छन् कि कतै विद्यालय भवन बगिहाल्छ कि ?
पानी परेसँगै वल्लो पल्लो छेउ भास्सिएर पहिरो गइरहेछ । वर्षापछिको चर्काे घामले सुख्खा पहिरो जाने सम्भावनाले पनि विद्यार्थी र शिक्षकलाई पिरोलिरहन्छ । कारण–विद्यालय छेउमै ठूलो पहिरो गएको छ । भवनको पर्खाल छेऊ पहिरो आइसकेको छ ।
हो, यसरी ज्यान नै जोखिममा राखेर अध्ययन भइरहेको छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–५ बराम्चीस्थित दोबङ आधारभूत विद्यालयमा । विद्यालयका बालबालिका र शिक्षक डरलाग्दो पहिरो झ्यालबाट हेर्दै कक्षामा सहभागी हुन बाध्य भइरहेका छन् ।
यहाँ अहिले एक सय ७९ बालबालिका अध्ययन गर्छन् । ‘यो भवनबाहेक लगेर अध्यापन गराउने अर्काे कुनै ठाउँ छैन,’ विद्यालयकी निमित्त प्रधानाध्यापक रञ्जिता रायमाझीले भनिन्, ‘लामो समयपछि विद्यालय खुलेपनि पहिरोको डरले अभिभावकले बालबालिका विद्यालय पठाउन छाड्नुभएको छ ।’
२०७२ को शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले कमजोर बनाएको यहाँको भूबनोटलाई वेवास्ता गरिदा २०७४ सालबाट तल्लो भेगबाट जमिन भास्सिदै खस्न थाल्यो । ‘खसेको पहिरोलाई बेवास्ता नगरि“दा बढ्दै गएर विद्यालय जोखिममा परेको प्रधानाध्यापक रायमाझी सुनाउँछिन् । विद्यालय भवन जिर्ण भएपछि समाधानका लागि स्थानीय सरकार नगुहारिएको हैन । तर, समस्या समाधान उन्मुख नदेखिएको उनी बताउँछिन् । ‘वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म यहाँको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, कतैबाट केही सुनुवाई भएको छैन, कतैबाट निरीक्षणसमेत नहुँदा दुखित छौं ।’
कक्षा ७ मा पढीरहेकी जुगल गापा घिचेकी १२ वर्षकी सुस्मिता तामाङ पहिरो देख्दा खुबै आत्तिने गर्छिन् । ‘बर्खापछि यस्तै हो पानी परेको परै हुन्छ, जमिन भास्सिएर खसिरहन्छ ,पहिरो हेरेर जर्बजस्ती पढ्नु बानी बनिसकेको छ ,तर पहिरोले मान्छे मरेको र बेपत्ता भएको सुन्दा खुब डर लाग्छ, ’तामाङले भनिन् । पहिरोको जोखिमसँग अभ्यस्त भएपनि त्यसकै डरले रातदिन पढाइमा मन नलाग्ने तामाङ जसोतसो विद्यालय आउने हिम्मत जुटाइरहेकी छिन् । भिरालो जमिनमा विधालय भएकाले एकाएक पहिरो खस्न थालेपछि अधिकाशं बालबालिका एकै स्थानमा जम्मा भएर रुने गरेका छन् । ‘कहिलेकाही त ३ या ४ जना मात्रै स्कुल आउछन्, पहिरोले सबैको सातो लिएको छ,’कक्षा ८ मा पढिरहेका कमल तामाङले भने ।
जुगल गाउपालिका वडा ५ का अध्यक्ष सनत अधिकारीले विद्यालयको जोखिमबारे थाहा पाएलगत्तै पहिरो रोकथामको लागि हरसंम्भव प्रयाश गरिरहेको बताए । हेलम्बु गापाको शिरभेग भेमेथाङ्गबाट सोहोरिएर कालो लेदो मिसिएको मेलम्ची बाढी र इन्द्रावती बाढीले ८ वटा विधालयलाई उच्च जोखिममा पारेको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइको तंथ्याक छ । ‘यसबाहेक बलेफी गापाको जलविरेमा रहेको आनन्द मावी जोखिममा परेको छ, जिल्लाभर बाढीपहिरोको जोखिममा परेका विद्यालयका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्,यसको वैकल्पिकबारे छलफल हुदैछ,’जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख कृष्ण सुवेदीले भने ।